Vatema tii Vagadziri - China Green tii Fekitori & vatengesi
Gardenia tii yeChinese green tii
Gardenia tii chirimwa chemhuri yeRubiaceae uye iyo gadiyadia marudzi. Gardenia tii ine mhedzisiro yekubvisa kupisa uye kubvisa detoxing, uye inokodzera vanhu vane muviri wakakura wekupisa, uye vanhu vane hunyanzvi bumbiro vanowedzera hutera hwavo hwepanyama. Gardenia tii imhando yechinyakare Chinese mushonga hutano tii, iyo inowanikwa nekuomesa michero yakakura ye gardenia. Inogona kuwedzera muviri wemunhu nechikafu chakapfuma, kubvisa kure kupisa uye kubvisa detoxify, kuwedzera kushomeka kwechirwere chemuviri, uye inobatsira zvakanyanya mukuchengetedza hutano hwevanhu.
Yangxian Xueya, hunyanzvi hweYixing Guta, Dunhu reJiangsu, chiratidzo chenzvimbo yezvigadzirwa zvemunyika. Yangxian Snow Bud inogadzirwa muNational Taihu Lake Scenic Area, uye zita rayo reti rinobva munhetembo yaSu Shi "Snow Bud ini ndinotsvaga Yangxian". Yangxianxue's buds dzakasimba uye dzakatwasuka, uye iwo ruvara rwakaita emerald green. Kunhuhwirira kwakanaka, kuravira kwakapfava, muto wakajeka uye wakajeka, uye pasi peshizha iri nyoro uye yakakwana.
Xinyang Tea Nzvimbo inzvimbo yekare yetii muChina ine nhoroondo refu yekugadzirwa kwetiyi. Zvinowanzo tendwa kuti Xinyang aive akapfuma muiyi panguva yeTang Dynasty panguva yeEastern Zhou Dynasty, iyo yakatanga makore anodarika zviuru zviviri apfuura. Xinyang Maojian inogadzirwa kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwenzvimbo dzemakomo eXinyang Guta, Hunhu rweHenan, senge: Cheyun Mountain, Lianyun Mountain, Jiyun Mountain, Tianyun Mountain, Yunwu Mountain, Bailongtan, Heilongtan, Hejiazhai, nezvimwewo. Xinyang Maojian tii ndeyeti tii uye iriwo rimwe remhando yepamusoro gumi yetii muChina. Xinyang Maojian tii, seyakajairwa tii, inonzi "Maojian" nekuda kwayo yakasimba, yakatenderera uye yakatwasuka misoro, uye izere nevhudzi jena. Inodanwawo kuti "Xinyang Maojian" nekuti inogadzirwa muXinyang.
Tiantai Gomo Yunwu Tea Gomo Organic Tea
Tiantai Yunwu tii inogadzirwa mumakomo eTiantai Mountain muZhejiang Province. Yepamusoro soro Huading ndiyo yakanakisa, saka inonziwo Huading Yunwu uye Huading tii. "Mhute uye kubwinya kutsigira Caixia, Guiyun Dongkou Ming Qijia". Huading Yunwu Tea ndeyemhando yepamusoro uye inozivikanwa seimwe yetii dzinozivikanwa. Vatengi vanouya kuzopa mukombe weHuading Yunwu tii ine yakanyanya kunhuhwirira kuravira uye Qingyuan runako, iyo ichaita kuti vanhu vanzwe kuzorodzwa uye vaneta.
Songyang Sirivha Monkey Tea Chazhidao Chinese Tea
Songyang Sirivha Tsoko inonzi yakatumidzwa tambo dzakakombama, yakafanana netsoko dzemakumbo nesirivha muvara. Songyang Sirivha Monkey Tea ndeimwe yemateki achangobva kugadzirwa muPurovhinzi yeZhejiang. Yakagadzirwa munzvimbo ine makomo ekumaodzanyemba kweZhejiang munharaunda yenyika yekuratidzira nzvimbo, inozivikanwa tii nhevedzano senge Yinhou Shanlan, Yinhou Dragon Sword, Yinhou White Tea, Yinhou Fragrant Tea, nezvimwewo, zviri zvemhando yepamusoro. Kunwa kunozorodza uye kunozorodza, nekunakidzwa kusingaperi. Ivo vanozivikanwa se "Pfuma muTi". “.
Shucheng orchid ndeye yakakurumbira tii munhoroondo, yakagadzirwa mukupedzisira Ming uye yekutanga Qing dynasties. Chimiro chakatetepa uye chakamoneredzwa kuita chirahwe chakaita kunge hokore, mabukira nemashizha zvinoumba maruva, uye ruvara irworuvara rweemaradhi, uye kumberi kwakapinza kunoratidzwa; hwema hwemukati hwakaita kunge orchid, senge, nyowani uye inogara kwenguva refu, iyo tambo inotapira, muto uri nyoro uye wakasvibira, uye pasi pemashizha akaenzana uye yeyero. Green, ndeyechikamu chegreen tii.
Yepamusoro yepamusoro yepamusoro mutengo wepamusoro super huremu hwekurasikirwa gomo organic green green
"Makapu Matatu Anonhuwirira" zvakatanga kubva pakusarudzwa kwemhando yepamusoro yakakangwa tii kubva kuTaishun Mountain's Yangping Tea Farm. Pakutanga yainzi "Taishun High Green", asi kusarudzwa kwayo kwezvinhu uye zvigadzirwa zvekugadzira zvakanyanya kuomarara, uye tekinoroji yekugadzirisa yakagadziriswazve zvakanyanya uye kugadziridzwa. Iyo yakasarudzika chigadzirwa maitiro. Nyanzvi dzetii dzakataura nezvayo se “muto wakajeka une mashizha egirini, unonhuwirira uye wakadzikama, wakadzokororwa, mikombe mitatu yekunhuhwirira kwenguva refu”, ndokuzonzi zviri pamutemo "makapu matatu ekunhuwirira."
Maegang Huibai Chinese tii shopu
Iyo tii yakavambwa munguva yeTongzhi yeQing Dynasty uye yakanyorwa semutero. Hunhu hwacho ndewekuti inotaridzika kutenderera uye kwete kutenderera, maruva akakomberedzwa akakombama, akasungwa akasungwa uye akachena, iine emerald green chando; muto unoita yero uye inopenya, pasi pemashizha yakajeka yeyero, hwema hwacho hwakasimba, uye kuravira kwakanyorova. Iyo ndeimwe yehupfumi hweChinese kutenderera tii tii. Munguva dzekare, iyo tii yaibudiswa muYuezhou yaibatanidzwa pamwe chete ichinzi Yuezhou tii. Shengzhou yanga iri iyo inogadzira nzvimbo yeYuezhou tii kubvira kare. MuWestern Han Dynasty, Shengzhou yainzi Yanxian, uye nzvimbo dzepamusoro dzeRwizi rweCoo'e muShengxian County yainzi Yanxi. Naizvozvo, iyo tii inogadzirwa muShengzhou inonziwo Yanxi tiyi ine mhando yepamusoro.
Meng Ding Gan Lu Chinese Chinese Green Tea
Mengshan tii inonyanya kugadzirwa pamusoro peMengshan Mountain, saka inonzi "Mengding tea". Pakati peRwizi rweYangtze, tii iri pamusoro peMengshan Mountain. Mengding tii inogadzirwa muMengshan, gomo rine mukurumbira mudunhu reSichuan neYa'an. Iyo saiti uko Wu Lizhen, muvambi weGanlu weHan Dynasty muQingfeng, akasima ruoko minomwe isingafi tii paMengding Mountain, Sichuan. Mengding Ganlu ndiye wekare mukurumbira tii muChina, uye Mengding Ganlu ndiye mumiriri weChina epamusoro gumi aneti tii, China epamusoro anozivikanwa tii tii, uye dzakamonana tii tii.
Lushan Yunwu Tea ndiyo yechinyakare inozivikanwa tii yerudzi rweHan. Iyo ndeimwe yeakakurumbira Chinese tii akateedzana uye ndewemhando yerudzi rwegirini tii. Pakutanga yaive yeti yemusango. Gare gare, mumongi ane mukurumbira weDonglin Tembere Huiyuan akachinja tii yemusango kuita tii yekumba. Yakatanga muHan Dynasty uye yakanyorwa se "mutero tii" muRwiyo Rwedzinza. Inotumidzwa zita raLushan, iyo inogadzirwa muJijijiang Guta, Jiangxi Province, China.